संखुवासभामा अझै लागु भएन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
संखुवासभा । गत भदौदेखि सङ्खुवासभामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु हुने भनिएको थियो । तर तोकिएको समय यता चार महिना बिविसक्दा पनि कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन ।
यस विषयमा सरोकारवालाहरु पनि बेखबर जस्तै छन् । जिल्ला अस्पताल खाँदबारीका प्रमुख डा. लक्ष्मण खड्काले बिमा बोर्डले यस विषयमा कुनै जानकारी नदिएको बताए । गत भदौदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गर्ने भन्दै अघिल्लो बर्ष अन्तरकृया कार्यक्रम गरेको बाहेक आफुहरुलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । कोशी अनवलाइनको जिज्ञासामा प्रमुख डा. खड्काले भने, ‘बिमा कार्यक्रमको बारेमा पछिल्लो के भईरहेको छ भनेर हामीलाई पनि यकिन छैन, म बोर्डमा बुझेर खबर गरुँला ।’
हालै मात्र अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले पनि बिमा कार्यक्रमको बारेमा त्यति ‘अपडेट’ नभएको स्वीकारे । तर आफुले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि बिमा कार्यक्रमको बारेमा भने चासो राख्दै आएको बताए । बिमाको बारेमा के हुँदैछ भनेर अस्पताल प्रमुखलाई सम्पुर्ण जानकारी लिन लगाएको र केही दिन भित्र बास्तविकता थाहा हुने अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु हुने भएपछि उत्साहित बनेका नागरिकहरु भने निराश बनेका छन् । सस्तो शुल्कमा धेरै रोगको उपचार हुने भन्ने सुनेका नागरिकहरु अझै सो ब्यवस्था नहुँदा अस्पताल ब्यवस्थापन र प्रसासनसँग रुष्ट हुन थालेका छन् । सरोकारवाला निकायले कम चासो दिएको कारण अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु हुन नसकेको स्थानीय नागरिकहरुको आरोप छ ।
यस विषयमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग कुरा गर्दा प्राविधिक तयारी पुरा नभएकोले तोकिएको समयमा कार्यक्रम लागु हुन नसकेको बताए । पुर्वाधार र कर्मचारी ब्यवस्थापन भईनसकेकोले बिमा कार्यक्रम लागु हुन समय लागेको उनको भनाई थियो । निर्देशक पोखरेलले यस अघि ३६ जिल्लामा विमा कार्यक्रम सुरु भईसकेको जानकारी गराउदै अब निकट भविश्यमा नै संखुवासभा लगायत प्रदेश १ का ११ जिल्लामा बिमाको कार्यक्रम सुरु गरिने बताए । कतिपय नितिगत समस्याको कारण पनि निर्धा्रित समयमा बिमा कार्यक्रम लागु गर्न नसकिएको पोखरेलको भनाई छ ।